Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. एभोकाडो : जसले हृदयाघात, मधुमेह, कब्जियत र हड्डी खिइँने समस्या हुन दिँदैन – Janata Live
एभोकाडो : जसले हृदयाघात, मधुमेह, कब्जियत र हड्डी खिइँने समस्या हुन दिँदैन
फागुन ०४, २०७६
ऊर्जा दिने घिउफल: ‘एभोकाडो’ फल नेपालीमा ‘घिउफल’ का नामले समेत चिनिन्छ । यो फल झलक्क हेर्दा आँप वा नासपाती आकारको देखिन्छ । यो फल गोलो र लाम्चो आकारको हुन्छ । यसको बोक्रा, गुदी र त्यसभन्दा भित्र गोलो आकारको बियाँ हुन्छ । बोक्रा र बियाँको बीचमा रहेको गुदी खाइन्छ । यो फलको स्वाद नौनी घिउ (मोही पारेर निकालेलगत्तैको नखारेको घिउ) जस्तै हुन्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने यो स्वादहीनजस्तै हुन्छ । तर, खान बानी परेका व्यक्तिलाई भने मिठो लाग्छ । यो फलको उत्पत्ति मेक्सिकोबाट भएको मानिए पनि आजकल संसारका विभिन्न मुलुकमा यसको उत्पादन हुन थालेको छ । नेपालमा पनि यो फलको उत्पादन हुन्छ । विशेषगरी काठमाडौंलगायतका पहाडी भूभागमा यसको उत्पादन हुने गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो फल सामान्यतः कात्तिकदेखि पुस महिनासम्ममा पाक्छ ।
स्वाद लिने विधि: यो फल खाने विभिन्न तरिका छन् । यसको फललाई सिधै ताछेर पनि खान सकिन्छ । फललाई घिउ (बटर) का रुपमा पाउरोटी वा रोटीमा दलेर पनि खान सकिन्छ । सलाद तथा जुस बनाएर वा मसिना टुक्रा बनाई दहीमा फिटेर पनि यसको स्वाद लिन सकिन्छ । मसिना टुक्रा बनाई अनारमा मिसेर हल्का नुन हालेर समेत यसको स्वाद लिन सकिन्छ ।
प्रचुर पोषण तत्त्व: खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको तथ्याङ्कअनुसार एभोकाडोमा पानीको मात्रा करिव ७३ प्रतिशत, प्रोटिन दुई प्रतिशत, कार्बोहाइड्रेड एक प्रतिशत र खनिज एक प्रतिशत पाइन्छ । यसमा करिव २३ प्रतिशत फ्याट (चिल्लो पदार्थ) पाइन्छ । एभोकाडोमा प्रचूर मात्रामा चिल्लो पदार्थ पाइने भएकाले नै यो ‘घिउ फल’ का रुपमा समेत चिनिएको हो ।
यसमा ‘क्याल्सियम,’ ‘फस्फोरस’, आइरन’, ‘पोटासियम’, ‘सोडियम’ जस्ता शरीरलाई आवश्यक खनिज तत्त्व पाइन्छ । सामान्यतः एक सय ग्राम एभोकाडो फलमा ९ सय ७५ मिलिग्राम पोटासियमको मात्रा हुन्छ, जुन शरीरलाई अत्यावश्यक तत्त्व हो ।
यसमा सूक्ष्म किसिमका विभिन्न पोषण तत्त्व समेत पाइन्छन्, जुन तत्त्व शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक हुन्छन् । प्रसिद्ध फुड राइटर (खाद्यसम्बन्धी लेखक) ‘गेलर्ड हाउजर’ का अनुसार एक दाना एभोकाडो खानाले मासुमा पाइने प्रोटिन, बटरमा पाइने फ्याट, हरिया सागसब्जीमा पाइने भिटामिन तथा खनिज, नट्स (ओखर, बदाम, काजु) मा पाइने पोषण तत्त्वका साथै छ पटक खाइने खाना बराबरको शक्ति पाइन्छ ।
शरीरमा ऊर्जा: सन्तुलितरुपमा यो फल खानाले बोसोको मात्रा वृद्धि हुनबाट बचाई शरीरको तौल सन्तुलित रहन सहयोग गर्छ । शरीरमा बोसोको मात्रा कम हुने भएकाले हृदयाघातबाट बच्न समेत यो फल खानु लाभदायक हुन्छ । मधुमेहको नियन्त्रणका लागि पनि यो फल उपयोगी छ । यसमा भएको चिल्लोपनले शरीरमा ऊर्जा दिने भएकाले व्यक्तिलाई आनन्द महशुस हुन्छ ।
यसमा प्रचूर मात्रामा पोटासियम पाइने भएकाले यसले रक्तचाप सन्तुलित पार्न पनि सहयोग गर्छ । यसको सेवनबाट उच्च तथा न्यून रक्तचापको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । यसमा पाइने फ्याटी एसिडले मुटु स्वस्थ बनाउँछ । एभोकाडोमा करिव सात प्रतिशहत फाइबरको मात्रा हुन्छ । अन्य फलफूलको तुलनामा यसमा बढी नै फाइबर पाइने भएकाले यसको सन्तुलित सेवन गर्दा पाचनसम्बन्धी कब्जियतजस्तो समस्याबाट पनि बच्न सकिन्छ । यसमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले आँखा स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ र हड्डी खिइँने समस्याबाट समेत बच्न सकिन्छ । विभिन्न किसिमका पौष्टिक तत्त्व पाइने भएकाले सन्तुलित तथा नियमितरुपमा एभोकाडो खानाले व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिकरुपमा स्वस्थ रहनुका साथै ऊर्जा थप्न पनि सहयोग पुग्छ ।
अनुहारको सुन्दरताका लागि मानिसले धेरै प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । जन्मजात पाउने सुन्दरतालाई जोगाई राख्न र छालाको हेरचाह मार्फत थप सुन्दर...
गर्भवतीले कुन अवस्थामा प्रोटिन पाउडर लिने?
काठमाडौं - गर्भवती महिलाले आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। गर्भवती अवस्थामा सन्तुलित भोजन गर्न चिकित्सकको विशेषज्ञ सल्लाह रहन्छ। जसमध्ये प्रोटिन...
यस्ता छन् अटिजमका १८ लक्षण : बच्चा जन्मिएको तीन वर्षभित्र चिन्न सकिन्छ
-विश्वको १ देखि २ प्रतिशत जनसंख्यामा अटिजम भएका अनुसन्धानहरुबाट देखिएको छ। -विश्व स्वास्थ्य संगठनले अटिजमलाई ‘विश्व जनस्वास्थ्य संकट’ घोषणा गरेको...
संसदमा पनि गुट चलाउने खेलमा प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, २८ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई आफ्नो पक्षमा लिन सके सरकार ढल्नबाट...
काठमाडौं - पछिल्लो समय मानिसको दैनिकी फेरिएको छ । जसका कारण मानिसहरु व्यस्त बन्ने खानपानमा ध्यान नदिँने जस्ता समस्याका कारण...
ललिता निवास प्रकरण : गच्छदारको मुद्दा पेसीमा
काठमाडौं–ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छादार एक वर्षपछि विशेष अदालत म्याद तामेलीको बारेमा निर्णय गर्न पेसीमा चढाएको...
काठमाडौं – लसुन नेपालीहरुको भान्सामा सजिलै पाईन्छ। लसुन धेरै पौष्टिक तत्वबाट भरिपूर्ण हुन्छ। भिटामिन सी, बी६, फाइबर, म्यागनीज, क्याल्सियम आदि...